Zuva: Chivabvu 3, 2020
Ministry of Interior Inozivisa 31 uye Kufamba Kurambidzwa Kwakawedzera kune Rimwe Zuva
Matunhu makumi matatu ane metropolitan chinzvimbo (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, nechitenderedzwa chakanzi "Guta Kupinda, Buda Nhanho" akatumirwa kune makumi masere nematanhatu ehurumende. [More ...]
General Directorate yeTCDD Tasimacilik inoenderera mberi nekutakura zvinhu munzvimbo yakakwira panguva iyo kutengeserana kwekunze kuchikanganiswa neCovid-19. Iyo yakareba uye refu kupfuura dzose kubvira iye Baku-Tbilisi-Kars mutsetse wakatanga kushanda mumwedzi wapfuura. [More ...]
Samsun Sivas Railway Line Kukwanisa Kuwedzeredza makumi mashanu muzana
Gurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu, Adil Karaismailo kha Iko kuvaka kwakatanga mumakore ekutanga eRepublic uye [More ...]
Makeup for Zvikoro uye Anodarika mu Ankara
Ipo Ankara Metropolitan Municipality inoenderera mberi nekuita basa rayo, inoenderera mberi nemabasa anoshongedza guta uye kuisa guta pamberi peanesthetics. Mukuwarika kunoda kugadziriswa, kugadziriswa nekupenda munzvimbo nenzvimbo [More ...]
Kuronga Kunoshanda kweIne Zvakawanda Zvinosangana Nepo Konya Ari Kumba
Konya Metropolitan Municipality inoenderera mberi ichishanda munzira dzinowedzeredzwa uye nzira pamazuva ekudzoka kumba. Kupedzisa kurongeka kwemigwagwa mizhinji mukubvumirwa kudzoka kumba mumavhiki apfuura kuitira kudzoreredza traffic yemaguta. [More ...]
Asphalt yakaradzikwa kumuchina paIzmit Seka Tunaki
Kocaeli Metropolitan Municipality, iyo yakashandisa akawanda mabasa ekufambisa akakosha mumakore gumi nematatu apfuura, inoita kuti zvifambe zvakanyanya nyore mumigwagwa, majoini uye nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Dhipatimendi reSainzi Nyaya mudunhu reIzmit [More ...]
Chiremba Hotline Inoenderera Kuzivisa Izmirers
Doctor Advisory Line, iyo yakapihwa neIzmir Metropolitan Municipality kuitira kudzivirira huwandu hwezvipatara uye kutungamira vanhu vanonetsekana kusvika chiremba, iri kuenderera mberi nekuzivisa vanhu veIzmir. Izmir vagari vagutsikana nemashandisirwo acho. Izmir Metropolitan [More ...]
Gurukota rezvemaindasitiri pamwe nehunyanzvi, Mustafa Varank akati, “Tichave nemavhiki mashoma ekutamba, asi zvakadaro hapana shanduro muchirongwa chikuru. Shamwari dzangu pakupera kweTurkey Cars Initiative boka rekushanda [More ...]
Transport uye Infrastructure Minister Karaismailoğlu Fair, chiri chimwe Turkey wokutanga njanji mutsetse uye pashure pokushanda kwemakore 1932 mubasa kuna Samsun-Sivas gobvu njanji mutsetse yakavhurwa 83 kusvika modernize September 29, 2015 [More ...]
Yepanzvimbo yekunyanyisa kuchengetedza yekufema, yakagadziriswa naBaykar, Biosys, Arçelik naAselsan mukubatana neI Ministry of Health, pasi pehukama hwe Ministry of Viwanda neTekinoroji, uye vakagamuchira zvakakwana mamaki kubva kuna vanachiremba mushure mekubudirira kuyedzwa. [More ...]
Iine UVH-170 isina kukomberedzwa kutakura helikopta yekambani, UAVOS inzira yakazvitenderedza uye yakazvigadzirira kubva kune wekutanga mutengesi kuenda kwairi uchishandisa nzira dzakasarudzika, wozodzoka uchibva kwaenda mutengesi uchishandisa nzira imwe chete iyoyo. [More ...]
Yenyika Yakakura Kwazvo Chikara Chekudzidzira Icho Chichaitwa Zvakashomeka Nekuda kweCCID-19
United States Navy yakazivisa kuti ichave ichabatikana mukutamba kwe 27th Pacific Exercise (RIMPAC), asi kurovedza muviri kwegore rino, kuchaitika kubva musi wa 17 kusvika 31 Nyamavhuvhu, kuchaitwa nenzira diki nekuda kweiyo coronavirus. US [More ...]
Mukuvhiya kunoitwa neve Ministry of Trade Forodha Enforcing zvikwata muIstanbul Muratbey Forodha Chikamu, zviuru mazana manomwe ezviuru zvekuvhiya, 760 miriyoni 1 zviuru girazi uye 310 8 [More ...]
Chibvumirano pakati peguru dzinofamba nendege, American Boeing neBrazil Embraer, yekuumba mubatanidzwa chakamiswa nesarudzo yaBeeing. American Boeing nekambani yeBrazil Embraer, yechitatu yakakura ndege inogadzira pasi [More ...]
Ministry of National Education yakati vadzidzisi 19990 vachanyoreswa vachange vachizoshanda seVashandirwi Vadzidzisi mukati meBazi kuti vashande mumapazi akasiyana nematunhu. Iyo Civil Serviceants Law Nha. 657, Nha. 652 [More ...]
Mukutaura kwakaitwa neGeneral Directorate of Highways yakabatana neDhipatimendi Rezvekutakurwa kwezvinhu uye zvivakwa, zvakaonekwa kuti kune huremu hwakakura kwazvo muTEM Highway uye nzira dzekubatanidza pakati peKavacık Junction-Mahmutbey West Junction-Kınalı Junction. [More ...]
Chipatara Chave Kuiswa pane 2 Bhirionani Runway yeAatatrrk Airport ..!
Kuvakwa kweYeililköy Hospital, iyo yakavakwa mumamiranji maviri eAtaturk Airport yakavharwa, anokosha mabhiriyoni maviri emadhora, inoenderera mberi. "Vakaparadza zvakakosha zvirinani," akadaro Karabat weCHP. Maererano nenhau yaYusuf Demir kubva kuSÖZCÜ; [More ...]
Mugwagwa uchavharwa mukati mekukura kwe3 Stage Rail System Project muMeltem
Mukati meyero yeAntalya Metropolitan Municipality 3rd Stage Rail System Project, chikamu cheMeltem Boulevard pakati pe İsmail Baha Sürelsan Avenue neTarık Akıltopu Avenue ichavharwa kuti iteere Mugovera, Chivabvu 4. Meltem Boulevard [More ...]
Bhanana Kuora Kana TCDD Tasimaci ichienda kubva kuVan kuenda kuIran mumazuva masere!
Bhanana Kuora Kana Freight Yechitima Inoenda Kubva kuVan kuenda kuIran Mumazuva masere !; CHP Istanbul Mutevedzeri weGweta Mahmut Tanal akagovana vhidhiyo nezveTCDD yekutakura zvinhu kuburikidza neyavo ye Twitter account. TCDD pane vhidhiyo yakagovaniswa [More ...]
Vagari veIstanbul vanoenderera mberi neMIMM yavo inoshanda pavanenge vari pamba
İBB inoenderera mberi nemabasa ayo ekuzorora zvekufambisa nekubatanidza Giyimkent Avenue neTEM Yanyo. 86% yekutenga kwekuchera kwapera mugwara rekubatanidza uye kuvakwa kwemakona. Zvikwata zveIMM zvinobatsira kubva panguva yekudzoka nekuda kwekunetseka kwemotokari [More ...]
Covid 19 Kuputika uye Rail Freight Transport
Munyika yedu, zvikamu zvina kubva muzana zvezvinhu zvese zvinotakura zvinhu zvinoitwa nechitima. Zviripachena kuti chikamu chehosha kubva kunyika dzekunze yakakura mukupararira kwezvirwere izvi. Sezvo kuchiri kusisina njanji mumachiteshi mazhinji, iyo mitoro iri kuuya kumatoko edu, [More ...]
Serap Timur Inosarudzwa kuRail System Projects Directorate paMIMM
Istanbul Metropolitan Municipality yakagadza Serap Timur, akashanda semutevedzeri wemaneja wedunhu muDLH, panzvimbo yaAslı Şahin Akyol, Rail System Projects Manager, waakadzinga. zvekare [More ...]
Nhasi Munhoroondo: 3 May 1873 Haydarpaşa-İzmit njanji
Nhasi, 3 Chivabvu 1873 Haydarpaşa-Izmit njanji yakapinda basa muIzmit paine mhemberero yekuti Sekuru Vizier Rüştü Pasha vaivepowo. Mutsara we91 km wakavakirwa mukati memakore maviri. 2 Chivabvu 3 Maraş-Köprüağzı kubatanidza mutsara nheyo [More ...]
Kuenderera mberi Yemahara Yemahara Kutakurwa Services kune Healthcare Professionals uye maFemistist muIzmir